ကိုနတ်ခ် နေဘုရားကျောင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
နေဘုရားကျောင်း ၊ ကိုနရာ့ခ်*
ရွေးချယ်သည့်စံနှုန်း i,iii, vi
ကိုနတ်ခ် နေဘုရားကျောင်း သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဩရိဿပြည်နယ် ကမ်းရိုးတန်းရှိ ပူရီမြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ၃၅ ကီလိုမီတာ (၂၂ မိုင်) ခန့်အကွာရှိ ကိုနာတ်ခ်မြို့တွင် တည်ရှိသော နေဘုရားကျောင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။  ထိုဘုရားကျောင်းသည် အေဒီ ၁၂၅၀ ခုနှစ်ခန့်က အရှေ့ဂင်္ဂါမင်းဆက်မှ ပထမ နာရာဆင်းဂါး ဒေဝ ဘုရင်အား ရည်စူး၍ တည်ဆောက်ထားသော ဘုရားကျောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဟိန္ဒူနေနတ်ဘုရား သူရိယ နတ်မင်း အား ရည်စူးတည်ဆောက်ထားသော ဘုရားကျောင်း အဆောက်အဦး အစုအဝေး၏ အကြွင်းအကျန်များမှာ ကျောက်တုံးမှ ထွင်းထုထားသော ၁၀၀-ပေ (၃၀-မီတာ) မြင့်သည့် ကြီးမားသော ဘီးလုံးများ နှင့် မြင်းများ တပ်ဆင်ထားသော စစ်ရထားပုံသဏ္ဍန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်က ၂၀၀ ပေ (၆၁ မီတာ) မျှမြင့်မားခဲ့သော်လည်း  ဘုရားကျောင်း၏ အစိတ်အပိုင်း အများစုမှာ ယခုအခါ ယိုယွင်းပျက်စီးနေပြီ ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် နတ်ကွန်းအပေါ်ရှိ ရှိကာရာ လှေပုံစံ မျှော်စင်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်က ယခုကြွင်းကျန်ခဲ့သော မဏ္ဍပ်အဆောက်အဦးထက် များစွာမြင့်ခဲ့သည်။ ကျန်ရစ်ခဲ့သော အဆောက်အအုံများနှင့် အစိတ်ပိုင်းများသည် ကာမနှင့် မေထုံမှုဆိုင်ရာ အခန်းများပါဝင်သော ၎င်းတို့၏ ရှုပ်ထွေးသော အနုပညာလက်ရာများ၊ ရုပ်တုများ၊ ပုံစံများကြောင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ သူရိယဒေဝလယ ဟုလည်း ခေါ်ပြီး ၎င်းသည် ဩရိဿ ပုံစံ ဗိသုကာပညာ သို့မဟုတ် ကာလင်ဂါ ဗိသုကာပညာ၏ ဂန္ထဝင် ချယ်မှုန်းထားမှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ကိုနတ်ခ် နေဘုရားကျောင်း ပျက်စီးရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ရှင်းလင်းမှု မရှိပဲ အငြင်းပွားစရာ ကိစ္စရပ်တစ်ခု ဖြစ်နေသည်။ ယူဆချက်များထဲတွင် သဘာဝအလျောက် ပျက်စီးခြင်းမှ စ၍ ၁၅ ရာစု နှင့် ၁၇ ရာစု အတွင်း မွတ်စလင် စစ်တပ်တို့မှ အကြိမ်ကြိမ် သက်သက်မဲ့ လာရောက် ဖျက်စီးကြခြင်း ဟူ၍ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားသည်။ ထိုဘုရားကျောင်းအား ၁၆၇၆ ခုနှစ်မှစ၍ ဥရောပသား သင်္ဘောသားတို့၏ မှတ်တမ်းများတွင် ဘုရားနက် ဟု ရည်ညွှန်းခဲ့ကြပြီး ၎င်း၏ မဟာမျှော်စင်ကြီးမှာ အနက်ရောင် သဏ္ဌာန်ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။  ထို့အတူ ပူရီရှိ ဂျာဂါနက် ဘုရားကျောင်းအားလည်း ဘုရားဖြူဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ထိုဘုရားကျောင်း ၂ ခုသည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိ သင်္ဘောသားများ အတွက် အရေးပါသော အမှတ်အသားများ အဖြစ် တည်ရှိခဲ့သည်။ ယနေ့တည်ရှိနေသာ ဘုရားကျောင်းအား ဗြိတိသျှတို့၏ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို အုပ်စိုးစဉ်အချိန်အတွင်းမှ ရှေးဟောင်းသုတေသန အဖွဲ့များမှ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ရည်ရွယ်၍ တစိတ်တပိုင်း ပြန်လည် ပြုပြင်ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ အဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပြီး ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့၏ အဓိက ဘုရားဖူးလာရောက်ရာ နေရာ တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိကာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဖေဖော်ဝါရီလခန့်တွင် ချန်ဒရာဘာဂကမ်းခြေတွင် မဲလ ခေါ် စုဝေးခြင်းအတွက် လာရောက်လေ့ ရှိကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ Konark: India, Encyclopaedia Britannica
↑ Sen၊ Sailendra (2013)။ A Textbook of Medieval Indian History။ Primus Books။ pp. 121–122။ ISBN 978-9-38060-734-4။
↑ Indian History။ Tata McGraw-Hill Education။ p. 2။ ISBN 978-0-07-132923-1။3May 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ James C. Harle (1994)။ The Art and Architecture of the Indian Subcontinent။ Yale University Press။ pp. 251–254။ ISBN 978-0-300-06217-5။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ Linda Kay Davidson; David Martin Gitlitz (2002)။ Pilgrimage: From the Ganges to Graceland : an Encyclopedia။ ABC-CLIO။ pp. 318–319။ ISBN 978-1-57607-004-8။
↑ Thomas Donaldson (2005)။ Konark။ Oxford University Press။ pp. 15–28။ ISBN 978-0-19-567591-7။
↑ Thomas Donaldson (2005)။ Konark။ Oxford University Press။ p. 28။ ISBN 978-0-19-567591-7။
↑ Debala Mitra 1968, p. 3.
↑ Lewis Sydney Steward O'Malley (1 January 2007)။ Bengal District Gazetteer : Puri။ Concept Publishing Company။ p. 283။ ISBN 978-81-7268-138-8။3May 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sun Temple, Konârak။ UNESCO။3May 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကိုနတ်ခ်_နေဘုရားကျောင်း&oldid=494840" မှ ရယူရန်